News Collection: प्रेम प्रस्ताव राख्नेहरु छैनन्
प्रेम प्रस्ताव राख्नेहरु छैनन्
नेपाली सिनेबृत्तकी राम्री नायिकामा पर्छिन उनी । दर्जनौ टेलिफिल्म खेलेकी उनी आधा दशक अघि सानो पर्दाकी नम्बर एक नायिकाको उपाधिधारी थिईन् । त्यही सानो पर्दाबाट तीन वर्ष अघि ठुलो पर्दामा फड्को मारेकी यी नायिका हुन सौजन्य सुब्बा । मंगोलीयन समुदायकी भएर पनि आर्यन जस्ती देखिन्छिन उनी । यो नै उनको सबल पक्ष हो ।५४ केजीबाट जिरो साईजमा झेरकी यी नायिका यतीबेला ४४ केजीकी छिन्, 'यो सबै दैनिक ब्यायाम र सन्तुलित भोजनको नतिजा हो ।' सौजन्यले जिरो साईज फिगरको रहस्योघाटन गरिन् ।
गत वर्ष रिलिज भएको फिल्म 'टक्कर दुई मुटुको' सर्वाधिक सफल भयो ।
जसमा उनले एकल नायिकाको भूमिका निर्वाह गरेकी थिईन् । त्यसपछि सौजन्यले निरन्तर फिल्ममा 'सोलो रोल' निर्वाह गर्न थालेकी छिन् । उनीद्धारा अभिनित 'स्वाभिमान' (काठमाडौंमा मात्र) जय होस्, म छु नी तिम्रो, मातृभूमि जस्ता सिनेमा प्रदर्शनको तयारीमा छन् । यी सिनेमा रिलिज भएपछि नेपाली सिनेबृत्तमा आफु जम्ने बिश्वास छ यी सुब्बालाई ।
घरायसी कामले केही समय ब्यस्त भएकी सौजन्यको एक जना निर्माता/नायकसँग बिवाह भयो भनेर हालै ब्यापक हल्ला चल्यो । हामीले सोधेका थियौं- के तपाईको बिबाह भइसक्यो ? 'खै कुन पत्रिकाले छापेछ, सुटुक्क विवाह गरिस भनेर साथीहरुको फोन आउँदा म पनि छक्क परें । आफुलाई थाहा नभएको यो कस्तो विवाह हो ?' सुब्बाले भनिन् ।यसो भन्दैमा उनलाई विवाहको प्रस्ताव नआएको भने हैन । 'उमेर बढ्दै छ, त्यसैले तिमीले अब विवाह गर्नुपर्छ भनेर आफैंसँग विवाह गर्नका लागि फकाउनेहरु धेरै छन् । त्यसरी फकाउँदा मलाई दया गर्न लागेको जस्तो लाग्छ ।'- सुब्बा भन्छिन ।
यौनको बारे कम बोल्न रुचाउने यी नायिका भन्छिन-'सेक्स धेरै नै सोधखोज गर्ने चिज हैन, यो त प्रकृतिले दिएको बस्तु हो । सेक्समा जति ध्यान दियो त्यति नै यसले सताउँछ, त्यसैले म सेक्सको बारेमा सोच्दिन ।'जीवनलाई भगवानको देन मान्ने सौजन्यलाई सोह्र वर्षकी हुँदा जीवन साह्रै छोटो छ जस्तो लग्थ्यो । तर आजकाल जीवन झन झन लामो लाग्न थालेको छ, 'जीवन निकै लामो र पीडादायी बनेको महसुस हुन थालेको छ । सायद हरेक दिन बाँच्नको लागि सँघर्ष गर्नु परेर होला ।' जीवनबाट थाकेको यात्री झैं निकै गम्भिर भावमा उनले भनिन् ।
विवाहको सोझै प्रस्ताव राख्नेहरु प्रसस्त भएपनि प्रेम प्रस्ताव राख्नेहरु छैनन भन्छिन यी नायिका । ' म ब्यस्त भएर प्रेम प्रस्ताव राख्नेहरुलाई वातावरण नमिलेको पनि हुन सक्छ ।' यसो भन्दै मुस्कुराउँदा सौजन्यको गालामा लाजको लाली प्रस्ट झल्किन्थ्यो ।